Dowladda Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay Saddex Dowladood - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay Saddex Dowladood
Wasiirka Maaliyadda Dowladda Soomaaliya Dr Cabdiraxman Ducaale Beyle ayaa xafiiskiisa ku saxiixay heshiisyada Deyn Cafinta oo hore ay u soo saxiixeen masuuliyiinta dalalka ku bahoobay NaadigaParis Club.
Wasiirka ayaa waxaa ay kala yihiin dowladaha uu heshiiska deynta cafinta ah uu la saxiiday dalalka Dalalka England, Denmark iyo Netherlands, kuwaas oo kamid ah dowladaha tageerada siiya Soomaaliya.
Saxiixaan ayaa daba socda go’aankii ka soo baxay shirkii dhacay 31-kii Maarso 2020 ee Soomaaliya looga saamaxay lacag dhan 1.4 Bilyan, iyadoo heshiiska shirkaas qodob ka mid ah uu dhigayay in Soomaaliya ay dal waliba gooni ula saxiixato inta uu ka saamaxay.
Isu geynta lacagta ay saamaxeen Sadexdaan Dowladood ayaa waxa ay gaareysaaa $69.9 million.
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaa ay ku cel celineysay inay wado qorshooyin Soomaaliya looga cafinayo deynta lagu leeyahay, iyada oo ay jiraan dowlado deynta ka cafiyay Soomaaliya.
Previous articleMadaxweynaha Somaaliland oo gaaray dalka Jabuuti
Next articleMadaxweynayaasha Puntland & Galmudug oo kulan xasaasi ah yeelanaya